Kutheni zirhoxisiwe nje Izinto Ezinokonwatyelwa zakwa-Airbnb endizibhukishileyo? | Indawo Yoncedo yeAirbnb
Ixesha lokulinda lide ngoku kuneliqhelekileyo
Ngenxa ye-coronavirus (COVID-19), ngoku sifumana inani elikhulu lezicelo sibe sinabasebenzi abambalwa. Ukuba ukubhukisha kwakho kuqala kwiiyure ezingaphezu kweziyi-72, nceda unxibelelane nathi xa sele kusondele usuku lokungena kwakho ukuze sikwazi ukuxhasa abo bafuna uncedo ngokukhawuleza. Ukuze utshintshe okanye urhoxise ukubhukisha, yiya kwiphepha lakho lohambo okanye kwideshibhodi yombuki zindwendwe.
NgoMatshi 11, 2020, uMbutho Wezempilo Wehlabathi (iWHO) ukubhengeze ukuqhambuka kweCOVID-19 njengobhubhane wehlabathi lonke. Ngokusekelwe kwisikhokelo soorhulumente kunye neengcali zempilo yoluntu sokuba qelele kwabanye abantu, Izinto Ezinokonwatyelwa ze-Airbnb ziye zarhoxiswa ukususela ngoMatshi 18, 2020, kwaye ziza kuqhubeka zirhoxisiwe ubuncinane de kube ngoAprili 3, 2020 ukuze intsapho yethu ibe sempilweni kwaye ikhuseleke.
Ukuba ubhukishele ixesha laphakathi kukaMatshi 18 noAprili 3, 2020, oko kubhukisha kuye kwarhoxiswa ngokuzenzekelayo. Uza kubuyiselwa okanye sele ubuyiselwe yonke imali yakho ngendlela yokubhatala oyisebenzisileyo ekubhukisheni into yakho enokonwatyelwa. Funda okungakumbi ngendlela okusebenza ngayo ukubuyiswa kwemali .
Ukubhukisha izinto ezinokonwatyelwa emva kuka-Aprili 30
Ungabhukisha nayiphi na into enokonwatyelwa ekhoyo emva kuka-Aprili 30. UAirbnb uza kuqhubeka eyibeke esweni le meko yehlabathi, kwaye siza kuyazisa intsapho yethu ukuba imeko iyatshintsha.
Iipolisi zokurhoxisa Izinto Ezinokonwatyelwa ze-Airbnb
Kwizinto onokuzonwabisa ngazo, yintoni Ipolisi yokubuyiswa kwemali yeendwendwe yakwa-Airbnb?
Ndingasitshintsha njani okanye sisirhoxise njani isicelo sokubhukishwa kwento abanokuznwabisa ngayo abantu?